Babhubhe ngooHacks basemini ats Ukukopa, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
UDADE NGOSUKU ethubeleza
Abalandeli aboyikisayo banokuvuya, njengoko sinokubakho okuFileyo ngokuKhanya kweMini okubandakanya iAimbot, i-ESP, iWall Hack, kunye nezinye izinto onokukhetha kuzo. Ukusinda ekufeni akuzange kumnandi kangaka!
Nceda uqaphele: Phambi kokuba uthenge abaFileyo ngeeMini hacks, qiniseka ukuba isixhobo osikhangelayo ukuba usithenge sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, nto leyo ethetha ukuba unokuzisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Onyuliweyo wethu Bafile ngoMini Hacks
Babhubhile ngooHacks bemini, iAimbot, iNorecoil, i-ESP, iWall Hacks nokunye
Thenga Bafile ngoMini IiHacks ngaphakathi 4 amanyathelo
Khetha umdlalo ongathanda ukuthenga iihacks kukhetho lwethu olubanzi
Chonga ukuba yeyiphi i-hacks eya kulungela iimfuno zakho ngokuchanekileyo kwaye ukhethe
Yenza intlawulo yakho usebenzisa iprosesa yethu yokuhlawula ekhuselekileyo neyodwa (ukuqinisekisa ukhuseleko lwabathengi)
Ukufumana ukufikelela kwiqhosha lakho kunye nokukhuphela abaFileyo ngokuKhanya kweMini!
Nje ukuba ufumane ukufikelela kwisitshixo sakho semveliso unokukhuphela abaFileyo ngokuKhanya kweMini!
Kutheni usebenzisa i-Gamepron Dead ngeeMini Hacks?
Ukufa ngoKhanya akuyiyo enye yeemidlalo ezinokuthi zithathelwe ingqalelo njenge-shooter, nangona ngokuqinisekileyo kukho iindlela zokufumana inzuzo ngaphezu kwabachasi bakho. I-Gamepron izama ukukugcina uphila, ngapha koko! Ufile ngokuKhanya ngumdlalo apho ungumbulali uzama ukuthatha iqela labasindileyo okanye ngokuchaseneyo - njengoko unokucinga, kukho indawo eninzi yokuba uxhamle ekusebenziseni abaFileyo ngoKhanya kwemini. Sebenzisa i-DBD Hacks ayizukunceda nje ukuba uphile ngokulula, kodwa uya kuba nakho nokubulala ngokulula! Nokuba ukhetha ukudlala njengoMbulali okanye uMsindisi ayinamsebenzi, nanjengoko uMntu wethu oFileyo ngokuKhanya kweMini eza kukunceda nokuba ungathini.
I-Gamepron yenza ukukopela ekucingelwa ukuba kuthathelwe ingqalelo njenge "premium". Ezi azizizixhobo zasimahla oqhele ukuzisebenzisa, njengoko uninzi lwabadlali lunganqweneli kuchitha imali kwabafileyo babo ngeeMini zasemini- ezi zihlala zingabo bavalwa ngokungxama okanye abazixhamli. cheats kwaphela. Izixhobo zasimahla ziya kuhlala ziyingxaki, njengoko uza kukhuphela umxholo onobungozi okanye inkqubo engenamsebenzi. Xa ufuna ukwazi ukuba ufumana umgangatho ophakamileyo oswelekileyo ngokuKhanya kweMini, i-Gamepron kuphela komqokeleli onokuba nokholo kuye. Sithambekele kancinci, ngokucacileyo, kodwa ukuba ukhe wazama nasiphi na isixhobo sethu kuba ngokwakho ubuya kuba uthetha into efanayo.
Izixhobo zethu zenziwe liqela labaphuhlisi abazinikeleyo, bonke abasebenza ubusuku nemini ukwenza ezona zixhobo zithembekileyo ze-DBD (phakathi kwabanye) onokuthembela kuzo. Nokuba izixhobo esele zikhutshiwe zihlala zihlaziywa ukuqinisekisa ukuba azisebenzi kuphela kodwa zikhuselekile ukuba abasebenzisi bethu bazisebenzise ngaphandle kokuvalwa. Kulungile, nonke nina "Gamers yoqobo" eneakhawunti ye-Steam eneminyaka eli-12 ubudala akufuneki ukuba ube nexhala malunga nokuvalwa!
Singumzekelo wee-hacks ezikumgangatho ophezulu, yiyo loo nto abasebenzisi beqhubeka nokubuyela ngaphezulu. Ngawo wonke umdlalo okhutshiweyo, ungalindela esinye isixhobo ukuba songezwe kwikhathalogu yethu! Xa ufuna ii-hacks zamva nje nezithembekileyo kuzo zonke izihloko zakho ozithandayo, i-Gamepron kuphela kwegama oya kuthi ulikhumbule- yiyo loo nto sikhetha ngokucacileyo ukuthenga abaFileyo bakho ngeMini Hacks.
Babhubhe ngoKhanya kuDonga lokukhangela (i-ESP)
Iinkcukacha zomdlali nge-ESP (igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
Bafa ngo-Daylight Item ESP ngezihluzi
Babhubhe ngo-Aimbot wasemini
Bebulawa zizilumkiso zotshaba lwasemini
Ufile ngemini yokutsiba kwimowudi yokukhanya (akukho monakalo wokuwa xa usebenze).
Ukufa ngamathambo oMini kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa.
Babhubhe ngoSuku baRhola imbuyekezo
Ngokufanelekileyo Bafile ngoMini yimfumba Iimbonakalo
Jonga abadlali kwiindawo eziqinileyo kunye ne-opaque! Khangela umbulali okanye abasindileyo ngokulula ngaphandle kwabafileyo nguDaylight Player ESP.
Ngamanye amaxesha ukubona imodeli yomdlali akonelanga, yiyo loo nto sikuvumela ukuba ubone olunye ulwazi oluncedo lwe-ESP (igama, imivalo yezempilo, kunye nomgama)
Into ye-ESP eneefilitha ikhona ngaphakathi kwe-DBD Hack yethu, ikunika ithuba lokubona izinto eziluncedo kwiindonga nakwimigangatho ye-opaque
Ungaze uphinde uphuthe kwakhona xa usebenzisa abafileyo ngo-Daylight Aimbot, abagqibeleleyo kwabo bakuthandayo ukusebenzisa ababulali kunye nabasindileyo
Ukufa ngengoma ye-Daylight Bullet (esebenzayo kwimigama emifutshane naphakathi)
Unokumisela abaFileyo nge-Daylight Aimbot ukuze ihambelane nazo zonke iimfuno zakho, kubandakanya nokuBekwa phambili kwamathambo!
Ngelixa ayisoloko iyingxaki, xa ivela iya kuba ngumcimbi. Yilahle kunye noMhlaziyi weRecoil obandakanyiwe kwi-DBD Hack yethu.
Ufile ngemini yokutsiba kwimowudi yokutsiba (akukho monakalo wokuwa xa uqalile ukusebenza)
Umsebenzi weSilumkiso uya kuba nomyalezo wesilumkiso kwiscreen sakho nanini na utshaba lujolise kuwe (okanye lusondele)
Ukufa ngamathambo oMini kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa
Bafa ngokuKhanya kwemini iitshekhi ezibonakalayo
Ungabasebenzisa abaFileyo ngoKhanya kwe-Aimbot ukujonga iitshekhi ezibonakalayo ngokubhekisele kukhwazo / ukujija kwakho - ukulahleka ayisiyiyo inketho apha!
Yiba ngoyena mFileyo oBalaseleyo ngoMdlali woKhanya eMhlabeni
Ukufa ngoMini ngumdlalo wokhuphiswano, ukutsho nje okuncinci. Kufana nomdlalo obonakalayo we "fihla uze ufune", ngaphandle kokuba ufunyanwe, uyarhuqwa ujikeleze imephu ngumbulali obulalayo kwaye ubekwe kumagwegwe enyama. Kuvakala ngathi kumnandi, akunjalo? Yenze ibe mnandi ngakumbi ngokuthenga ukufikelela kwabafileyo bethu ngeMini Hacks kunye nokuphumelela nokuba ukweliphi icala!
Abaswelekileyo abadumileyo ngooHacks baseMini kunye nokukhohlisa
Babhubhile ngoMini we-ESP kunye neWallhack
Abanye abaSwelekileyo ngokuKhanya kweMini kunye nokukhohlisa
Kuya kufuneka kwaziwe ukuba bonke abaFileyo ngoKhanya kweMini abayi kufana, njengesixhobo esinye sasimahla asizukubonelela ngamava afanayo nala siwenza apha eGamepron. Imidlalo yevidiyo ihlala ijongwa njengolonwabo, kodwa abanye bethu bayithatha ngokungathí sina kunaleyo - sisixhobo sokhuphiswano kwabanye, kwaye oko kuthetha ukuba uya kufuna ukuphumelela imidlalo emininzi kangangoko. Yilapho i-Gamepron ifika khona emfanekisweni, njengoko sinikezela ngeyona nto ifileyo yokuFa ngokuKhanya kwemini efumaneka kwiwebhu! Kukho isizathu sokuba sinikezele ngee-DBD Hacks ezithandwayo kunye nokukhohlisa okufumaneka kwi-Intanethi, kwaye kungenxa yokuba abathengi abanakufumana ngokwaneleyo.
Kukho inani eliqingqiweyo leendawo zokubeka ezikhoyo kubasebenzisi bethu, esisesona sizathu sokuba sibanjwe ngentlonelo. Ngelixa besinokuthi sehlise umgangatho wezixhobo zethu kwaye sizinike wonke umntu, sigqibe kwelokuba ukugcina umgangatho kunye nokubonelela ngenkonzo "ekhethekileyo" yeyona ndlela.
Nangona Ukufa ngoMhla wokuKhanya kungengombulali, kusaqhubeka ukuba nemeko apho ukusebenzisa i-DBD Aimbot yethu kuya kugcina ukufihla kwakho. Nokuba ufuna isitrayikhi esikhawulezayo ukuze ubaleke ekubanjweni ngababulali, okanye uzama ukugqiba uMsindisi usebenzisa iiprojekhthi, wethu oFileyo nguDaylight Aimbot uya kukunika ukufikelela kuzo naziphi na izakhono ezifunekayo. Abanye abasindileyo ohlangana nabo baya kuba nobuqhetseba, kwaye nangona i-DBD ESP yethu kunye neWall Hack ziya kunceda ukubakhupha, awungekhe uphuthelwe kukudubula xa ithuba livela.
Xa ufuna ukudibanisa ngaphandle kwemibuzo ebuziweyo, unokuthembela kwi-DBD Aimbot yokugcina injongo yakho iyinyani kwaye ibala lakho libukhali! Ukubekwa phambili kwamathambo kunye ne-Auto-Aim / Umlilo zikho ngaphakathi kwesi sixhobo, kodwa sisiqalo nje-unokufumana amanqaku afana nokubulala kwangoko kunye nokuKhangela okubonakalayo okukhoyo kwabafileyo ngu-Daylight Aimbot ngokunjalo.
Zininzi izinto eziluncedo ezifakwe kuFile ngokuKhanya, ngakumbi ukuba ukwiqela labasindileyo. Ungafumana amabala okufihla kunye neeJenereyitha ngokusebenzisa i-DBD ESP kunye neWall Hack ukufikelela kulwazi olubalulekileyo malunga nendawo ekungqongileyo. Ababulali bangasisebenzisa esi sixhobo ukugcina iithebhu apho bakhoyo abasindileyo, kwaye abo basindileyo bangenza okufanayo kuMbulali. Ukwazi ukuba lukhona phi utshaba lwakho kwaye nokuba banempilo engakanani na enokubaluleka kwisihloko esifana noFileyo ngoKhanya kwemini, njengoko ababulali banokuya kubadlali abanempilo esezantsi.
Unokubabona abasindayo bebaleka bezama ukuvula iiJenereyitha, ukuvumela ukuba ucwangcise uhlaselo lwakho. Into ye-ESP enezihluzi kukuchukumisa okuhle ukukhethwa kunye nokusetyenziswa, kwaye yonke into ngokudibeneyo iya kuqinisekisa ukuba uphumelela wonke umdlalo odlalwayo. Musa ukukholelwa kuthi? Yizame ngokwakho kwaye ubone indlela eyoyikeka ngayo.
Sinikezela ngeempawu zonyawo ngaphakathi kwe-DBD yeHack yethu eya kuthi ivumele ababulali bethu ababulalayo ukuba benze umsebenzi ngokungxama. Unokulandela umkhondo wexhoba lakho ngokulandela iinyawo ezifumaneka kuyo yonke imephu, emva koko unokuvula uMonakalo oMkhulu ukuze uzikhuphe ngesitrayikhi esinye esikhawulezayo. Uninzi lwexesha kufuneka uhlasele uMsindayo amaxesha amaninzi ngaphambi kokuba ubabulale ngokupheleleyo, kodwa inqaku lethu loMonakalo oMkhulu liya kukunika ithuba lokuzikhupha phantse kwangoko. Ungasebenzisa indawo ekumgama ukubona ukuba ikude kangakanani inkxaso yabo, kuba abo basindileyo kufuneka basebenze kunye ukuphumelela umdlalo-ukuba ungumbulali, ungasebenzisa inqaku lomgama ukubona ukuba kude kangakanani amaxhoba akho.
Kuzingelwa okanye kuzingelwa Abafileyo ngoKhanya kwemini, yiyo loo nto ukusebenzisa ezi mpawu kuya kuba yimfuneko kubo bonke abasebenzisi bethu.
Umthamo omkhulu weempawu ezibandakanyiweyo ngaphakathi kwabafileyo bethu ngokukhanya kwemini sisizathu esikhulu sokuba abantu babuyele kuthi ngenxa yazo zonke iimfuno zabo zokugenca. Nangona i-DBD Hacks incipha ekuthandeni, sisaqhubeka sikhonza abantu ababakhangeleyo njengaye nabani na. Asisoze sanqaba ukuhlaziya kunye nokuphucula isixhobo esisele sikhuphile, yiyo loo nto abaFileyo bethu ngokuKhanya kweMini kulula ukuba ibe # 1 ukhetho kwimarike ngoku. Ngeempawu ezongeziweyo ezinje ngeRad ye-2D, ukuSusa (ukuvumela ukuba ususe ukubuyela kwakhona kwaye usasaze, kunye nenkungu / umsi) kunye nenkqubo yesilumkiso, kuncinci kakhulu okuya kukuyekisa ukukhuphisana kwinqanaba eliphezulu ngokumangalisayo.
Kule nqanaba, siziva kuphela kwento enokumisa umsebenzisi we-Gamepron ukuba ibe yimicimbi ye-router! Ukuba ufuna ukwazi ukuba kunjani kwicala eliphumelelayo lotshintsho, thenga isitshixo semveliso, kwaye ufumane ukufikelela kwabaFileyo bethu abahle ngeMini Hacks namhlanje.
Babhubhile ngooHacks bemini imibuzo
Kutheni abantu bethu abafileyo ngokuKhanya kweMini
Awufuni kubambeka kwi-DBD Hack, ngenxa yokuba ubhatalela imveliso. Zininzi izixhobo zasimahla ezikhoyo eziza kukuthintela, ke kutheni uzikhathaza? Sebenzisa abaKhuselekileyo bethu nababonakalise ngokupheleleyo abaFileyo ngokuKhanya kweMini ukufumana okuninzi kumdlalo owuthandayo; ukuphumelela kuhlala kwenza izinto zibe ngcono!
Kutheni abafileyo bethu ngokuKhanya kweAimbot
Sebenzisa okungasekhoyo nge-Aimbot yasemini kuya kukuguqula ube ngumbulali obonakalayo, nokuba ngowuphi umlinganiswa omthandayo. Nokuba ngumlingiswa osanda kukhutshwa njengoMichael Myers okanye uMongikazi, ukusebenzisa kwethu abafileyo ngoKhanya kweAimbot kuya kwenza ukuba ukubulala kubulale umoya. Kupholisa uxinzelelo kancinci xa usazi ukuba awuyi kuphoswa nakuphi na ukudubula kwakho, njengako konke ukubala / ukubala kweprojekhthi.
Kutheni abafileyo bethu beMini ye-ESP
Isixhobo esifanelekileyo se-ESP siyakuhlala siyitshintsha indlela oza ngayo kumdlalo, ngakumbi kumdlalo ofana noFileyo ngokuKhanya. Lo mdlalo ujolise kuwo omnye umsebenzi kwiqela ngalinye: Ababulali kufuneka babulale abasindileyo, kwaye abasindileyo kufuneka bavule iijenreyitha. Nge-DBD ESP yethu, ukufumana abaSindayo kunye neeJenereyitha yinkqubo elula kwaye awuyi kudinwa nangaliphi na ixesha kungekudala.
Kutheni abantu bethu abafileyo nguDaylight Wallhack
Sebenzisa okungasekhoyo kwethu ngokuKhanya kuDonga lokuKhanya kuphela kwendlela yokuqinisekisa ukuba ukhuphela izixhobo ezikhuselekileyo neziluncedo. Uhlala usazi ukuba abaSindileyo / abaBulalayo bakuphi kule nto yenziwe, kwaye izokukunceda uphumelele ukufana ngakumbi njengesiphumo. Kutheni ungayisebenzisa? Ewe, kuba ukuphumelela kuyonwabisa kwaye iDBD Wall Hack iya kukunceda wenze okungakumbi kuyo.
Kutheni abaFileyo bethu beMini yeNorecoil
Kumdlalo onokuchongwa ngemillisecond nje, kuya kufuneka uyazi ukuba uza kuchaneka ngokuchanekileyo. Ngokususa ukubuyela kwakhona kwi-equation, ungazama ukuhlasela abaSindileyo ngaphandle kweziphumo - akukho kubuya ungakhathazeki, oko kuthetha ukuba ukuchaneka kwakho kuya kuphuculwa njengesiphumo.
Ungazikhuphela njani ezona ziFileyo ngeeMini zokukhanya?
Unendawo efanelekileyo yokufumana abafileyo ababalaseleyo ngokuKhanya kweMini, kodwa kuqala, kuya kufuneka uthenge isitshixo semveliso. Awunakho ukufikelela kukukopela ngaphandle kwesitshixo semveliso esifanelekileyo, ke qiniseka ukuba sele uyithengile enye ngaphambi kokuzama ukukhuphela abafileyo bethu ngokuKhanya kweMini (kungenjalo ayizukusebenza).
Kutheni le nto abafileyo bakho ngokukhanya kwemini kuxabisa kakhulu kunabanye
Sinikezela ngemveliso efikelelekayo apha kwiGamepron, nangona inokuthi ithathelwe ingqalelo ibiza kakhulu xa ithelekiswa nabanye babanikezeli oqhele ukubabona. Awuyi kuba nexhala malunga nokuvalwa ngelixa ukopela ngeGamepron, njengoko zonke ii-cheats zethu zingafumaneki kwi-100 %- sikwanikezela ngenani eliqingqiweyo leendawo zokubeka eziza kusetyenziswa, oko kuthetha ukuba linani elithile kuphela labadlali abanokusebenzisa iihacks zethu ngaxeshanye.
Kukho umda wexesha ofanelekileyo kuye wonke umntu olapha kwiGamepron, njengoko sikholelwa ukuba ubhetyebhetye luphawu olubalulekileyo ekufuneka unalo. Unokuthenga izitshixo zemveliso ezisebenza yonke imihla, ngeveki, okanye nangenyanga! Oku kuthetha ukuba unokumisela ukuba lingakanani ixesha ekufuneka ulithathile, kwaye kukuwe ukuba uyafuna okanye ungasisebenzisi thina abaFileyo ngokukhanya kwemini ixesha elide.
Kuhle Bafile ngoMini yimfumba Iimbonakalo